आफ्नै भतिजीसँग निर्वस्त्र भएर सुत्थे महात्मा गान्धी ! ⋆ Palpalko.com::No.One news portal from nepal.
भारतका महान् नेता मोहनदास करमचन्द गान्धीले भारतलाई बेलायती उपनिवेशबाट मात्र मुक्त बनाएनन्, विश्वलाई शान्ति र अहिंसाको पाठ पनि सिकाए ।
त्यसैले, उनलाई भारतले बापु, सन्त, राष्ट्रपिता तथा महात्मा गान्धीजस्ता उपनाम दियो । तर, उनको जिवनको भित्री पाटो भने निकै घतलाग्दो तथा रोचक रहेछ ।
बेलायती चर्चित इतिहासकार जेड एडम्सले आफ्नो पुस्तक गान्धी :- नेकेड एम्बिसनमा महात्मा गान्धीको विषयमा केही रोचक तथा विवादास्पद तथ्य उजागर गरेका छन् ।
उक्त पुस्तकले आम सर्वसाधारण र मिडियामा समेतसनसनी फैलाएको छ । सादा जिवन उच्च विचारका धनी, विश्व प्रसिद्ध अहिंसावादी नेता महात्मा गान्धीकाविषयमा सार्वजनिक गरिएका यस्ता आश्चर्यजनक तथ्यहरु धेरैले पत्याउन पनि सकेका छैनन् ।